ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၃ (အမျက်လေးရယ်တဲ့ ပြေစေလို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၃ (အမျက်လေးရယ်တဲ့ ပြေစေလို)	20
ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၃ (အမျက်လေးရယ်တဲ့ ပြေစေလို)
Posted by Courage on Jun 12, 2015 in Creative Writing, Poetry | 20 comments
ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ – ၁၃
မြန်မာရှေးခေတ် စာဆိုတို့ရဲ့ သမိုင်းကို စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို မင်းပြစ်ဒဏ်သင့်ခဲ့တဲ့ စာဆိုအမတ်ကြီးများစွာကို တွေ့ရမှာပါ။ ထိုအမတ်ကြီးတွေကလဲ မင်းပြစ်ဒဏ်သင့်နေချိန်အတွင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အမျက်တော်ပြေစေဖို့ရွယ်ကာ ရတု၊လင်္ကာများစွာ ရေးသားခဲ့တာကိုလဲ တွေ့ရမှာ မလွဲ။ အဲ့ဒီ့အထဲမှာမှ “မဲဇာတောင်ခြေ၊ စီးတွေတွေတည်း”အစချည် လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီးရဲ့ “မဲဇာတောင်ခြေ” ရတုဟာ အလွန်ထင်ရှားတာပေါ့။ မှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ရာဇသင်္ကြန်၊ ဦးပေါ်ဦးတို့ ရေးသားခဲ့တဲ့ လင်္ကာတွေကလဲ ထင်ရှားတာပါပဲ။
ထို အမျက်ဖြေကဗျာတွေထဲမှာမှ သက်တော်ရှည် ပညာရှိသုခမိန်အမတ်ကြီး အနန္တသူရိယရဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာကတော့ အစောဆုံး မျက်ဖြေလင်္ကာလို့ဆိုရမယ့်ကဗျာပါ။ ဒီကဗျာဟာ အစောဆုံး မျက်ဖြေလင်္ကာဖြစ်ရုံမက မြန်မာစာပေသမိုင်းမှာ “သိုးကလေ”အစချည် “ရွှေနှင့်ယိုးမှား ပန်းစကား”၊ “မြကန်သာ တောင်ကျချောင်းတေး ရေ၀င်ပြေးလျက်”အစချည် “မြကန်”ကဗျာတို့ရဲ့ နောက် တတိယ အစောဆုံး ကဗျာလို့လဲ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ကဗျာပါ။ ပုဂံခေတ် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ စာပေအဆင့်အတန်းကို ရုပ်လုံးထင်စေတဲ့ ကဗျာဆိုရင်လဲ မလွဲပါဘူး။ ဒီကဗျာရဲ့ သက်တန်းကို စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ နရပတိစည်သူမင်းရဲ့ နန်းစံသက် ၅၃၅-၅၇၂ခုနှစ် အတွင်းကရေးသားခဲ့တာဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ကျော်ပြီးပေါ့။
မောင်ကာကြီးအနေနဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာတစ်ပုဒ်အကြောင်းကို ရေးမယ်လို့ စဉ်းစားမိလိုက်ချိန် လက်ဝဲသုန္ဒအမတ်ရဲ့ မဲဇာတောင်ခြေထက် အနန္တသူရိယအမတ်ရဲ့ လင်္ကာကိုပိုပြီး ရေးဖို့ ဓါတ်ကျမိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မဲဇာတောင်ခြေရတုဟာ မြန်မာစာပေသမိုင်းရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတပါးဖြစ်လင့်ကစား သူဟာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ရတုပါ။ အနန္တသူရိယရဲ့ လင်္ကာကျတော့ လောကဓမ္မအကြောင်းကို ဇောင်းပေးဖေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာမို့ပါ။
ပြီးတော့ မောင်ကာကြီး လက်လှမ်းမှီသလောက် လေ့လာမိသလောက် ပြောရရင် ဒီကဗျာရဲ့ စာအသွားအလာဟာ အခြား အမျက်ဖြေကဗျာတွေနဲ့မတူပါဘူး။မျက်ဖြေကဗျာဖြစ်စေမယ့် လှုံ့ဆော်မှုအပိုင်းလို့ဆိုရမယ့် မင်းပြစ်ဒါဏ်သင့်တယ်၊ ထိုအခါ ရာဇဒဏ်ထိ အမတ်တစ်ဦးက မိမိ စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အကြောင်းကို စာစီတယ်၊ ပြီးနောက် မင်းကြီးကို ဆက်သတယ်၊ အဲ့အခါ မင်းကြီးက အမျက်ပြေကာ လွှတ်စေ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီအထိ အခြားကဗျာများစွာနဲ့ အသွားအလာတူပေမယ့် မတူတာက ဒီကဗျာကို အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးဟာ လူသတ်ကုန်းမှာရေးခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ မင်းကြီးရဲ့ ရာဇမာန်ပြေခဲ့ လွှတ်စေအမိန့်စေခဲ့ပေမယ့် အချိန်လွန်ခဲ့ပြီမို့ အနန္တသူရိယဟာ ကဗျာရေးပြီး နောက်မှာပဲ ဆုံးပါးသွားရဲ့ရပါတယ်။ မောင်ကာကြီး ဥာဏ်မှီသလောက် ပြောရရင် ဒီကဗျာရဲ့ အထူးခြားဆုံးကတော့ အခြား မျက်ဖြေကဗျာများနဲ့မတူ “ငါ့အားသနားပါ လွှတ်ပေးပါ”ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးပါဝင်သော တောင်းပန်စကား လုံးဝမပါဝင်သော ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။
မဲဇာတောင်ခြေဟာ တောဘွဲ့၊ ဘုန်းတော်ဘွဲ့၊ အလှဘွဲ့၊ အလွမ်းဘွဲ့တွေ များစွာ ရောပွန်းနေတဲ့ ရသမြောက် ကဗျာလင်္ကာ တစ်ပုဒ်ဆိုတာ ညင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူး။
“မြစ်ရေတွေ ပတ်လည်ဝန်းရံနေတဲ့ မြိုင်တောဆီကနေ ရွှေပြည်ဌာနမှာရှိတဲ့ ဘိုးတော်မင်းကြီးရဲ့ ကောင်းမှု စေတီတော် ဂူပုထိုးတွေနဲ့ ရွှေရောင် ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ ရွှေနန်းတော်ကြီးကို လွမ်းမိပါတယ်။ မဲဇာဆိုတာက တစ်ကယ်တော့ တောကြီးမျက်မဲတစ်ခုပေါ့။ ချုံနွယ်တွေပိတ်ပေါင်းလို့ သစ်ကြီးဝါးကြီးရဲ့ အရိပ်တွေကလဲ နေ့ဆိုလဲ နေကိုတောင်မမြင်၊ ညဆိုလဲ ကြယ်ကိုတောင်မမြင်ရပါလား။ မြစ်ကိုလဲဖြတ်ကာ တောကိုလဲဖြတ်ကာ တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေတွေကလဲ အေးလိုက်တာပါ့လား။” ဆိုတဲ့ အဖွဲ့မျိုးတွေဟာ မောင်ကာကြီးတို့လို နှောင်းခေတ် စာပေ၀ါသနာရှင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ နှုတ်တိုက်ကို အလွတ်ကျက်ကာ မှတ်သားသင့် အတုယူသင့်တဲ့ အရေးအသားပါ။ ဒါကြောင့်မို့လဲ လက်ဝဲသုန္ဒရ ရယ်လို့ နာမည်ကြီးတာပေါ့။
သို့ပေမယ့် မောင်ကာကြီးကတော့ အနန္တသူရိယရဲ့မျက်ဖြေလင်္ကာကိုသာ ပိုလို့ကြိုက်ပါ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေးထားတာရှင်းလို့ ဖတ်ရတာလွယ်သလို၊ အကြောင်းအရာပိုင်းထင်းတော့ နားလည်ရလဲ ပိုလွယ်လို့ပါခင်ဗျာ။
ကဲ… အခုတော့ နရပတိစည်သူမင်းကြီးက နောင်တော် မင်းယဉ်နရသိင်္ခရဲ့ အိမ်တော်ပါသား လူယုံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးအား အထင်တော်လွဲကာ သတ်စေ အမိန့်ချပြီး သကာလ၊ အမတ်ကြီးအားလူသတ်ကုန်းသို့ထုတ်ကာ အသတ်အံ့စဲစဲတွင် ပေနှင့်ကညွတ်ကိုတောင်းခံကာ အမတ်ကြီးလင်္ကာတစ်ပုဒ် စတင်ရေးသားခဲ့လေပြီ ဆိုတဲ့ အခြေအနေလေးကို ပြေးမြင်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့။
“ရေမြေ့သခင် အရှင်မင်းကြီး နားဆင်ပါလော့။ အရှင်မင်းကြီး… လွန်ခဲ့သော နှစ် အနည်းငယ်ခန့်က အခြေအနေကို ပြန်လည်ကာ မြင်ယောင်ကြည့်ပါတော့အရှင်။ အာဏာကို တက်မက်လေသော ဇောဖြင့် သားကိုအဖေသတ်၊ အကို ကို ညီသတ်သော အရေး၊ အမှတ်မဲ့ပြုခဲ့လေသော အမှားကြောင့် တိုင်းတပါးသားတို့၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသော အရေး။ ထိုထိုသော နှလုံးပျက်ဖွယ် အရေးတို့၏နောက်တွင်တော့ တဏှာရမ္မက်အမိုက်ဖုံးမှုကြောင့် တရား၏လော မတရား၏လော ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်းလာကာ မိမိညီတော်အရင်ဖြစ်သူ၏ မိဖုရားအား ကူးကျော်တော်ကောက်ခြင်းဆိုသော မပြုသင့်သည့်အမှုကို ပြုမိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ညီတော်၏ လက်စားခြေ သတ်ဖြတ်သုတ်သင်မှု ခံရခြင်းဆိုသောအရေးတို့ကို ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်တော်မူပါ အရှင်မင်းကြီး။ လူသားတစ်ယောက်၏ ကောင်းစားရေးအတွက် အခြားလူတစ်ယောက်မှာ ကြွေပျက် ပျက်သုန်းခဲ့ရလေသည်ဆိုသော အမှုကို လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် အရှင်။
ရွှေနားတော် ပန်ဆင်တော်မူလဲ့ပါ အရှင်မင်းကြီး။ စည်းစိမ်းချမ်းသာ မင်းနန်းလျာဖြင့် အမတ်ပေါင်းခြံစွာ နေထိုင်ရခြင်းသည်မှာလဲ အပြောကျယ် ကျယ်ပြောလှသည့် သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက်မှ ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာ မျက်တစ်ခတ်မျှသာ ရှိပါသည်အရှင်။ မည်သည့်အရာမှ ထာဝရတည်မြဲသည်မရှိပါ။ အနိစ္စသဘောကို ရှုမည်ပါလော့ အရှင်။
လျောက်တင်ပါသည် အရှင်မင်းကြီး။ အရှင်မင်းကြီးထံမှ ကြင်နာသနား မေတ္တာထားလျက် ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်မျိုးအား မသတ်ခဲ့လျှင်လဲ ကြမ္မာဘေး မလွတ်သေးသည့် ပုထုဇဉ်လူသားများအဖို့ တစ်နေ့တွင်တော့ သေကြရဦးမှာပါအရှင်။ မမြဲသစ္စာ သံသရာ ၀ဋ်ဘေး မရှောင်လွဲနိုင်သေးသည့် လူသားများအဖို့ အို နာ သေ အရေးဆိုသည်မှာ ကြုံတွေရမည်မှာ မလွဲဓမ္မတာပါအရှင်။ သတိချပ်တော်မူပါ။
ရှိခိုးကော်ရော် အကျွန်ပူဇော်ခဲ့ပါသည် အရှင်မင်းကြီး။ သံသရာနယ်အတွင်း မလွတ်ကင်းနိုင်သေးသမျှ အကျိုးဝိပါက်ဆိုသည်မှာလဲ ဆပ်၍ကုန်နိုင်မည်မထင်ပါအရှင်။ ယခုအခါတွင် ကျွန်တော်မျိုး အပေါ်အား မင်းကြီးထားတော်မူသော အမိန့်စကားအတွက် အလွန်တရာမှ အားရတော်မူပါသည်။ ကျွန်တော်မျိုးကြီးအပေါ်တွင် တင်ရှိသော အတိတ်ကံကြွေး ဆပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်ဟုသာ မှတ်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတော် ကြီးမြတ်လှ ကြောင်းပါအရှင်။ ကျွန်တော်မျိုးသည် မင်းကြီးပေးခဲ့သော ထိုပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်မှ မင်းကြီးအပေါ်တွင် စိတ်ကွက်ခြင်း အပြစ်တင်ညိုညင်ခြင်း လုံးဝမရှိတော်မူပါ။ အရာအားလုံးအတွက် ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကြည်လင်သော စိတ်နှလုံးတော်ဖြင့် ကျွန်တော်မျိုး၏ ၀ဋ်ကြွေး အရှင့်အပေါ်တွင် မကျရောက်စေရန် ဆုပန်ခဲ့ပါသည်။ ဤသည်ကား မမြဲခန္ဓာ အနိစ္စာကို လက်ခံ၍ သွေးဖြင့်ရေးသော ကျွန်တော်မျိုး၏ သစ္စာစကား ဖြစ်တော်မူပါသည် အရှင်။”
မောင်ကာကြီးကတော့ ဒီ အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီးရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ရတာ သူ့အကြောင်းကို ပြန်ရေးရတာ အရမ်းကို အားရတော်မူပါသည် အဲ အားရတာပါပဲ။ တစ်ကယ်တော့ အရေးအသားလဲကောင်းပြီး တရားစကားတွေပါ နှောနေတဲ့ ဒီကဗျာကို မောင်ကာကြီးရဲ့ ပင်ကို အရည်အချင်းနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ ရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုတော့ ၀န်ခံပါရစေ။ တစ်လောက မွေးရပ်မြေကို ခဏပြန်သွားတဲ့အချိန် မောင်ကာကြီးကို စာကောင်းပေကောင်းတွေ ဖတ်တတ်အောင် စာတွေကဗျာတွေ ရေးတတ်ရေးချင်လာအောင် အဓိက လှုံ့ဆော်သူလို့ တစ်ခါကပြောဖူးတဲ့ ဆရာဖြစ်သူနဲ့သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့မှာ ဆရာနဲ့ စကားတွေလဲပြောရင် စာကြောင်းပေကြောင်းတွေလဲပြောရင်းနဲ့မှ “ကျွန်ုပ်၏ အမှတ်တရ ကဗျာများ” ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာတွေရေးနေကြောင်းကို ပြောမိတော့ ဆရာက မောင်ကာကြီးကို ကုန်ကြမ်းတွေ များစွာကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ဒီ မျက်ဖြေလင်္ကာအကြောင်းကို အထူးပြုပြီး ရှင်းပြပြောပြ ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတာကလဲ ဆရာသမားရဲ့ စေ့ဆော်မှုကြောင့်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ပြီးတော့ ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ အဖွဲအနွဲ့တို့ ဘာတို့ဆိုတာဟာ မောင်ကာကြီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုတာထက် ဆရာ့ရဲ့ စကားတွေပဲဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါရစေ။
အခုလို အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးရဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာကို ရေးပြီး နောက် မောင်ကာကြီး စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အတိတ်ဘ၀ကရှိခဲ့သော သံသရာဝဋ်ဘေးများ အတိတ်ကံကြွေးများ ကုန်ပါစေ။ မိမိပြုမိသော အမှုကြောင့် မိမိထံတွင်ရှိနေသော အမျက်များကျေပါစေ၊ ပြေပါစေလို့ ဆုပဲတောင်းလိုပါတော့တယ်။ စာဖတ်သူများအတွက်လဲ ထပ်တူထပ်မျှ တောင်းဆုပြုလိုက်ရပါတယ်။ ။ လွန်တာရှိရင် ၀န္ဒာမိပါ။
— မျက်ဖြေလင်္ကာ —
မြစပဲရိုး says: မောင်ကာကြီး
. ပျောက်နေတာ ကြာလို့ အလုပ်တွေ များနေလား လို့ တွေးနေတာ။
. အသံပေး ပြန်မြင်ရတာ ရော၊ ကဗျာလေး တွေ ပြန်ဖတ်ရတာ ရော ဝမ်းသာသွားတယ်။
ဒီကဗျာ ကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီး သိသကွဲ့။
အဲ့အချိန် အမတ်ကြီး တို့ ခေတ်မှာ ဝင်းဝင်း အကြောင်း ကို မသိသေးလို့ နေမှာပါ။ :-)))
Courage says: အိမ်ပြန်နေလို့ဒေါ်လေးမြ…
ဒါနဲ့ အဲ့ ၀င်းဝင်းဆိုတာ တားတိပုညော်
kai says: အဲဒီခေတ်က..
သက်ဦးဆံပိုင်ကို.. တော်တော်ကြောက်ကြရတဲ့သဘောကို ပြနေတဲ့ သမိုင်းပြလင်္ကာပေါ့…
ဖနောင့်တချက် လက်သီးစက်။ ။
Courage says: ရှိခိုးကော်ရော်၊ပူဇော်အကျွန်
မင်္ဂလာပါ သူကြီးမင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝေဠုဝတီ ကို လု ကြ ရာ က
အကို ကို သတ်ပြီးး မင်းးဖြစ်
အမတ်ကြီးး ကို လည်းး အကို ရဲ့ လူ ဆိုပြီးးး မရှုဆိတ် ရာက ဖြစ်တဲ့ အကျိုးးဆက်တွေ ထင်ပါ့…
Courage says: ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်ပါမကျန်တွေပေါ့
Mike says: .ကြိုက်သဗျာ
Courage says: ကျေးဇူး
တောင်ပေါ်သား says: ( ယခုလွှတ်လည်း၊မလွတ်ကြမ္မာ
Courage says: ဂုတ်ပေါ် ဓါးမိုးလုစဲစဲမှာ ဒီလောက်တည်ငြိမ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ အံ့သြော်လို့ မဆုံးပါဘူးဗျာ
manawphyulay says: တယ်… လက်မ မကောင်း လက်မ
ခြေမ မကောင်း ခြေမ
Courage says: မှန်လှပါ… ထီးဖုရားကြီး လက်ကမြည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း CCTV မှတ်တမ်းများကို ဖေါ်ပြနေပါသည် ဖုရားးးးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: အနုပညာသည် ငါ သူတပါး ယောကျာ်း မိန်းမအတွက် မဟုတ်…
Courage says: အနု=အစဉ်လိုက်ခြင်း(ပါ) သို့မဟုတ် အစစ်မဟုတ်ခြင်း(မြန်)
အနုပညာ= အစဉ်လိုက်ပါစေခြင်း အတတ် (သို့) အစစ်မဟုတ်သော ခံစားမှုကို စီးဝင်စေတတ်သောအတတ်
လို့ ဆရာ ဦးသုခ ပြောတာ ကြားဖူးပါရဲ့…
kai says: အနု- အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် အကြိမ်ကြိမ်၊ .. တဲ့..။
Anu，1 （indecl.） [Vedic anu，Av. anu； Gr. a]/nw to a]/na along，up； Av. ana，Goth. ana，Ohg. ana，Ags. on，Ger. an，Lat. an （in anhelare etc.）] prep. & pref. — A. As prep. anu is only found occasionally，and here its old （vedic） function with Acc. is superseded by the Loc. ‹-› Traces of use w. Acc. may be seen in expressions of time like anu pañcāhaṁ by5days，i. e. after （every）5days （cp. ved. anu dyūn day by day）； a. vassaṁ for one year or yearly； a. saṁvaccharaṁ id. — （b） More freq. w. Loc. （= alongside，with，by） a. tīre by the bank S.IV，177； pathe by the way J v.302； pariveṇiyaṁ in every cell Vin.I，80； magge along the road J v.201； vāte with the wind J.II，382.
B. As pref.：（a） General character. anu is freq. as modifying （directional） element with well-defined meaning （“along”），as such also as 1st component of pref.-cpds.，e. g. anu + ā （anvā°），anu + pra （anuppa°），+ pari，+ vi，+ saṁ. — As base，i. e. 2nd part ofapref.-cpd. it is rare and only found in combn sam-anu°. အင်္ဂလိပ်လို.. Art ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချက်.. တသိန်း…။
Courage says: ဟုတ်ကဲ့… … သက္တတလိုဆိုရင်တော့ aNu=atom ပါတဲ့။
တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော့က ပါဠိလိုလဲနားလည် သက္တတလိုလဲ တစ်လုံးမှ မတတ်တဲ့အတွက် ဆရာဦးသုခ ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ကိုးကားကြည့်ရုံပါ။ ကြားဖူးတာလေးကို ဝေမျှတဲ့ သဘောပေါ့။
Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: အနုပဿနာ ဆိုတာရှိသဗျ…။ ၀ိပဿနာရှေ့က.. ဘုရားဟောအစစ်..။
အနု… က.. ဗမာလိုတော့..အနုစိတ်.. အနုလုံပဋိလုံ…
Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: ဟုတ်တယ်။ အနုမြူဆိုတဲ့ စကားကို ခြေခံပွားကြည်မယ်ဆိုရင်လဲ
အနုပညာဆိုတာ အလွန်တရာမှ သေးနုသော အနုစိတ်သော အတတ်လို့ ပြောလို့ရသွားပြန်ရော
Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: ဒီကဗျာရဲ့ အဓိပါယ်က
သူ့ ခံစားချက်အရ၊ဒီကဗျာဟာအားလုံးအတွက်ညွှန်းဆိုရေးဖွဲ့ ထားတာဖြစ်လို့၊အသိသံဝေဂရစေတဲ့အကြောင်း
မှာရှာပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ ဆန္ဒတွေကို မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တာကိုလည်း၊အခုချိန်ထိစိတ်မကေါင်းဖြစ်ရပါတယ်။။
Courage says: ဟုတ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကဗျာတွေစာတွေကို ကျွန်တော်တို့လို နောက်လူတွေ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ ဆရာ ဆရာမများရဲ့ ကဏ္ဍက အရမ်းကို ရေးကြီးတာပေါ့။ ဘာမှ မသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အသိအလင်းရဖို့ နှလုံးသား နူးညံ့သွားစေဖို့ဆိုတာ ဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ အဟော အပြော ပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တာပေါ့လေ။ သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာကိုယ်၌က ဒါဟာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်အဖြစ်ပဲ နားလည်နေရင် သင်ယူသူတွေအနေတဲ့ ကဗျာဆိုတာလောက်ပဲ သိနိုင်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်ကြားပေးသူများက ဒါဟာ အနုပညာ ဒီလိုခံစား ဒီလိုတွေ ဒီလိုရေးရတယ်လို့ ရှင်းလင်းပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
အခုလို ကျွန်တော်တို့ မသိမှီလိုက်တဲ့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီအေး